Jacob Zuma Videos at ABC News Video Archive at abcnews.com
Back to Jacob Zuma
FILE - In this Thursday, Dec. 21, 2017, file photo of former South African Jacob Zuma , gestures as a new party leader addresses delegates during the closing of the ANC's elective conference in ...
FILE - In this Thursday, Dec. 21, 2017, file photo of former South African Jacob Zuma, gestures as a new party leader addresses delegates during the closing of the ANC's elective conference in Johannesburg. The director of South Africa's National Pro
FILE - In this Monday, Dec. 18, 2017, file photo, President Jacob Zuma , looks on at the African National Congress (ANC ) elective conference in Johannesburg. The director of South Africa's National ...
FILE - In this Monday, Dec. 18, 2017, file photo, President Jacob Zuma, looks on at the African National Congress (ANC) elective conference in Johannesburg. The director of South Africa's National Prosecuting Authority says that former president Jaco
Acting President of South Africa Cyril Ramaphosa addresses Parliament in Cape Town, South Africa Feb. 15, 2018, prior to being sworn in later. Ramaphosa replaces Jacob Zuma who resigned yesterday. ...
Parliament gathers for a swearing in ceremony for acting President of South Africa Cyril Ramaphosa, inside Parliament in Cape Town, South Africa, Thursday Feb. 15, 2018. Ramaphosa replaces Jacob Zuma ...
Acting President of South Africa Cyril Ramaphosa listens to debate in Parliament in Cape Town, South Africa Feb. 15, 2018, prior to being sworn in. Ramaphosa replaces Jacob Zuma who resigned ...
Acting President of South Africa Cyril Ramaphosa smiles while he listens to a debate in Parliament in Cape Town, South Africa Feb. 15, 2018, prior to being sworn in. Ramaphosa replaces Jacob Zuma who ...
People watch a public live broadcast on television of President Jacob Zuma being interviewed on state television in Pretoria, South Africa, Wednesday, Feb. 14, 2018. The speaker of South Africa's ...
People watch a public live broadcast on television of President Jacob Zuma being interviewed on state television in Pretoria, South Africa, Wednesday, Feb. 14, 2018. The speaker of South Africa's parliament wants to hold a motion of no confidence in
More Jacob Zuma NewsMore Jacob Zuma Videos